News - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News
စျေးနှုန်းသက်သာပြီး မိသားစုတွေအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ Toyota Avanza
လမ်းကြမ်း၊ တောလမ်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ကိုက်ညီစေမယ့် Mazda ရဲ့ Pickup
အင်ဂျင်ပါဝါသေးပြီး ဆီစားသက်သာတဲ့ Ford EcoSport
Steering Design & Features တွေထပ်မံဆန်းသစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ The New Range Rover Evoque 2021
New model ကားသစ်တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးမည့် Suzuki Myanmar
BAIC ကားများရဲ့ Fuel Tank နဲ့ ဆီစားနှုန်းတွေက ဘယ်လိုရှိမလဲ?
Volvo Car Myanmar ၏ ၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ်ကျင်းပ!
Bestune Motor ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်သော အစဥ်အလာ
အမိုက်စား new design နဲ့မကြာခင်ပေါ်ထွက်လာတော့မည့် BMW The new X4
Honda သည် Civic ကို အခြေခံထားသည့် SUV အား Developing ပြုလုပ်မည်။
Hyundai N Model များတွင် ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်မည့် 2022 Hyundai Kona N
ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ့် Luxury Sporty SUV Type, MG ZST ကို MG Myanmar မှမိတ်ဆက်
Infotainment System အသစ်အပါအဝင် ပြောင်းလဲဆန်းသစ်မှုများဖြင့် ထွက်ရှိလာသည့် 2022 Alpine A 110
Seoul Motor Show တွင် မိတ်ဆက်ပြသလိုက်သည့် Mercedes – Benz EQG Concept
ဆန်းသစ်သည့် Style ဖြင့် မြင်တွေ့ရမည့် 2022 Suzuki S – Cross
Times City Yangon မှာလာမယ့်ရက်အတွင်း Road Show ပြုလုပ်မည့် JMC Myanmar
လှပခန့်ထည်သည့် ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထားသည် 2022 Volkswagen Lamando ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
Mexico အတွက် အထူးထုတ် Model ( ၄ ) မျိုးဖန်တီးလိုက်သည့် Lamborghini Huracan Evo
KIA Logo အသစ်ဖြင့်ထွက်ရှိလာသည့် 2022 KIA Telluride
ထူးခြားမှုများဖြင့်ထွက်ရှိလာသည့် 2022 Honda Civic Hatchback
(3) ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Ford Year End Sales Promotion Event
Soft Opening of KIA Yangon Showroom by Alliance Auto
Walkthrough of 2nd Yangon International Motor Show
Lamborghini Huracan EVO RWD သည် ထူးခြားမူများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း
MCOTY 2019 :Best Pickup of The Year
MCOTY 2019: Best Large-sized Family SUV of The Year
MCOTY 2019 Event Photos
၅၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် Special Mercedes G 63 AMG
New Options များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာသည့် 2023 Chevy Corvette
New Alpine A4 810 Concept အားဟိုက်ဒရိုဂျင် စွမ်းအင်သုံး Supercar အနေဖြင့် 2035 တွင်ဖန်တီးမည်။
ပြောင်းလဲဆန်းသစ်ခြင်းများဖြင့် ထွက်ရှိလာသည့် 2022 Abarth 595 နှင့် Abarth 695
Special Space-themed အနေဖြင့် ခံစားရမည့် Bentley Bentayga SUV